ဆွဲဆောင်မှု အားပြင်းပြင်း စတိုင် ခပ်မိုက်မိုက် အလှတရားတွေ နဲ့ ဖမ်းစား လိုက် တဲ့ ‘ရှင်ယွန်းမြတ်’ ပုံလေးများ.. – Shwe Naung
ဆွဲဆောင်မှု အားပြင်းပြင်း စတိုင် ခပ်မိုက်မိုက် အလှတရားတွေ နဲ့ ဖမ်းစား လိုက် တဲ့ ‘ရှင်ယွန်းမြတ်’ ပုံလေးများ..
ပရိသတ်ကြီးရေ မြင်သူတိုင်းငေးလောက်တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် အလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ်ရှင်ယွန်းမြတ်ကို သိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ မော်ဒယ်လ်လောကကိုဝင်ရောက်တာ မကြာသေးပင်မဲ့ ချစ်ပရိသတ် တစ်ခဲနက်အားပေးမှုကို ရယူပိုင်ဆိုင် ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ယောကျာ်းလေးချစ် ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝန်းရံအားပေးမှုအများဆုံးရရှိထားတဲ့သူမကတော့ ‘social media’ လောကမှာ နာမည်တစ်လုံးနဲ့ ရပ်တည်နေသူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဆွဲဆောင်မှု အားပြင်းပြင်း စတိုင် ခပ်မိုက်မိုက် နဲ့ ‘ရှင်ယွန်းမြတ်’က အခုလည်း ချစ် ပုရိသတွေ ကြွေကျသွားအောင် ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ ဖမ်းစားလိုက်ပြန်ပါတယ်။သူမရဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်တွေကို လူမှုကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာ ပေါ်တွင် အများဆုံး တင်လေ့ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ လတ်တလော မှာတော့ ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိနဲ့ လှရက်လွန်းနေတဲ့ ‘GYM’ က အမိုက်စား ပုံလေးတွေကို ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ပုံလေးထဲမှာ ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိနဲ့ အခါခါ ပြန်ကြည့်ချင်မိအောင် အလွန် လန်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ လတ်တလော လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ အမျိုးသားတွေရဲ့ ဝန်းရံခြင်းကိုခံနေရတာဖြစ်ပြီး လူကြိုက်များလာတဲ့ မော်ဒယ်အမိုက်စားလေးဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ပရိသတ်တွေတွက် ရှင်ယွန်းမြတ်ရဲ့ ‘Gym’ က ပုံလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေမြင်သူတိုင်းငေးလောက်တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် အလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ်ရှင်ယွန်းမြတ်ကို သိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ မော်ဒယ်လ်လောကကိုဝင်ရောက်တာ မကြာသေးပင်မဲ့ ချစ်ပရိသတ်တစ်ခဲနက်အားပေးမှုကို ရယူပိုင်ဆိုင် ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ယောကျာ်းလေးပရိသတ်တွေရဲ့ ဝန်းရံအားပေးမှုအများဆုံးရရှိထားတဲ့သူမကတော့ ‘social media’ လောကမှာ နာမည်တစ်လုံးနဲ့ ရပ်တည်နေသူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သန္တာဗိုလ်ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယို….
အလန်းစား ဖက်ရှင် နှင့် မိမိုက်လွန်းနေတဲ့ မေပန်းချီရဲ. ဗီဒီယို …
သူမရဲ့ ရွှေရင်အလှတရားတွေကို ပရိသတ်တွေ မြင်သာ‌အောင် ဆက်ဆီကျကျ ထုတ်ပြနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် နန်းအမရာရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ……..